5 kaamirooyinka quusin kara xagaaga oo aadan tabi karin | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | Sawir, Qalabka Naqshadeynta
Waxaan hadda ku jirnaa xagaaga ficil ahaan oo isaga ayaa inbadan oo idinka kamid ah ku maqnaan doontaan fasax. Wixii sawirro muuqaal ah oo aniga oo kale ah, waa lagama maarmaan in la helo qalab ama qalab la jaan qaadaya baahiyaheena si aan u soo qabanno muuqaal tayo sare leh, muuqaal xallin sare leh nooc kasta oo deegaan ah. Juun, Julaay iyo Ogast waxay noqon doonaan bilooyin noo keeni doona heerkul wanaagsan iyo maalmo nasasho oo aan ku galno badda moolka dheer. Weligaa ma ku dhaqantay sawir biyo ah?
Haddii aad xiiseyneyso inaad isbarato adduunkan maanta waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo bandhigo xul ka kooban shan kamaradood oo duubaya oo qaadaya sawirrada biyaha hoostooda ku jira oo leh qiimayaal iyo faa'iidooyin kala duwan (laga bilaabo 70 euro ilaa 350), haddii aad rabto inaad aragto badeecadaha Waxaan ka hadlayaa, sii wad akhriska!
SJ4000 WiFi: Kaamiradani waxay bixisaa natiijooyin qeexitaan sare waxaana loogu talagalay in lagu duubo cayaaraha biyaha iyadoo la iska caabinayo illaa 30 mitir oo ka hooseeya dusha sare. Awooddiisa waxaa ka mid ah 12-pixel HD lens-ballaaran oo ballaadhan, iyo wax soo saar HMDI ah oo sidoo kale ku jira HD. Waxa kale oo ay taageertaa kaararka xusuusta illaa 32 Gb, waxay duubtaa fiidiyowyo qaab .mov ah oo lagu soo koobay H.264. Waxay sidoo kale leedahay shaqada WIFI sida magaceedu tilmaamayo waxaana laga heli karaa midabbo kala duwan. Qiimaha? Waxaad si fudud ugu heli kartaa 70 euro. Waa kan tijaabada fiidiyowga si aad u aragto natiijooyinka ay na siiso.
SJCAM M10: Moodelkani wuxuu ka sarreeyaa dhammaantiis cabbirkiisa yar laakiin aan u hurin waxqabad aad u wanaagsan xaaladaha ba'an. Waxay leedahay muraayad aad u yar-yar oo la qaadan karo oo lens-balaaran ah (darajada A, taas oo ka badan 170 darajo) oo leh 12 megapixels iyo qeexitaan sare. Sida moodalkii hore, waxay leedahay ugu hooseyn qoto dheer 30 mitir, waxay taageertaa kaararka xusuusta oo leh awood gaareysa 32 gigabytes, soosaarka HMDI oo qeexitaan sare leh, AV video sidoo kale wuxuu u shaqeeyaa sida webcam. Diiwaanada HD (720) ama HS buuxa (1080) xallin. Qiimaheedu waa 97 yuurood iyada oo aad laheli karto waxaad kuheli kartaa muuqaalo fiidiyow oo wanaagsan sida kuwa aad hoos ka arki karto
Hero 3 GoPro: Kaamiradaan la quusin karo waxay na siin doontaa fiidiyowyo leh xirfad dhammaystiran oo leh qaabab qabasho oo kala duwan: Laga soo bilaabo 960 pixels oo ah 30 wareeg halkii labaad illaa 1080, in kasta oo ay sidoo kale na siineyso suurtagalnimada inaan sawirradeenna ku qaadno 720 pixels iyo 60 wareeg halkii labaad. Waa quusin karo ilaa 40 mitir qoto dheer. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale u taagan tahay nooca codka ay qabato waana in kamaradan aad ku qabsan karto dhawaqyada ugu khiyaanada badan sidoo kale waxaad ku nadiifin kartaa codka la qabtay nidaamkiisa yareynta buuqa. Dhinaca kale, waxa kale oo ku jira nidaamka Wifi ee isku dhafan kaas oo kuu oggolaanaya inaad kontoroosho illaa 50 kamaradood oo ka fog masaafo dhan ilaa 180 mitir ama sidoo kale kaameraddaada si fog uga xakameyso barnaamijka gopro ee Smartphone-kaaga ama Tablet-kaaga. Waa maxay qiimaheeda? Mark Mark Media waxaad ku heli kartaa 186 yuuro, oo ah gorgortan. Halkan waxaa ah fiidiyow muunad ah si aad u aragto nooca sawirrada ay soo saarto.
Nikon COOLPIX AW110: Kaamiradani waxaa loogu talagalay in lagu soo qaado sawirrada dhulka ama biyaha hoostooda, waxay u adkeysataa qoto dheer 18 mitir oo batterigeeda waxay bixisaa muddo duubitaan ah 60 daqiiqo Waxay u taagan tahay dabeecadeeda iska caabinta, naxdinta leh iyo barafowga, taas oo u oggolaan doonta qaadashada sawirrada xaaladaha ugu daran. Waxay ka kooban tahay nidaam GPS leh nooc kombaasiro elektaroonig ah iyo khariidado adduun oo kala duwan si loogu awoodo in lagu calaamadeeyo sawirradeenna haddii aan wadno sawirro aan ku marayno meelo ama waddamo kala duwan. Waxay leedahay 16 megapixel CMOS sensor oo leh xasaasiyad sare taas oo ka dhigaysa kamaraddu inay la jaan qaado xaaladaha maalin iyo habeenba. Dhinaca kale, waxay leedahay xasiliya sawir si loo hubiyo tayada ugu dambeysa ee sawirada (aad ugu habboon isboorti xad dhaaf ah) iyo waliba nidaam Wi-Fi kaamil ah oo lagula wadaago fiidiyowyadaada iyo sawirradaada. Qiimaheeda? Qiyaastii 300 euro oo waad arki kartaa nooca natiijooyinka ay ka bixiso fiidiyaha soo socda:
Olympus Stylus adag TG-3: Yaab dhab ah iyo waddo ka baxsan. Tayada sawiradaadu waa mid xirfad leh. Waxay leedahay aperture ugu badnaan-dhalaalaya oo ah 1: 2: .0, iyo indho indheyn aad u xiiso badan oo noo oggolaan doonta inaan helno afar koror (taas oo 35 mm u eg 25-100 mm). Waxay leedahay afar nooc oo qabashada Super Macro ah (Microscope, Microscope Control, Focus Stacking and Focus Bracketing), taas oo noo oggolaan doonta inaan soo qabanno xitaa faahfaahinta ugu yar ee xaaladdeenna. Intaas waxaa sii dheer, sida kamaradaha intiisa kale ee aan aragnay, waxay leedahay nidaam isku-xirnaanta Wi-Fi oo noo oggolaanaya inaan adeegsanno dalabka Ol.Share oo noo oggolaanaya inaan sawirradeenna uga qaadno kiniinigayaga ama taleefannada casriga ah sidii waxay ahaayeen kontorool fog. Mashiinkaani waa mid aad ugu adkeysanaya boodhka, heerkulka hoose (illaa 10 darajo eber ka hooseeya), quusin ilaa 15 mitir qoto dheer, naxdin gaareysa 100 kiilo iyo hoos udhaca ilaa 2 mitir. Qiimaheeda? Waa hagaag, waxay ku dhowdahay 350 euro ka dibna markaa waxaan kuu daynayaa muunad fiidiyoow ah oo ah nooca sawirrada ay awood u leedahay inay na siiso, dabcan tani waa tan aan ugu jeclahay aniga iyo GoPro Hero 3.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » 5 kaamirooyinka quusin kara xagaaga oo aadan seegi karin